၂၀၁၆ မှာ လူငယ်တွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားကြမလဲ … ? (၁) - Myanmar Spirit
Home / Aung Ko U - UMK / ၂၀၁၆ မှာ လူငယ်တွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားကြမလဲ … ? (၁)
၂၀၁၆ မှာ လူငယ်တွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားကြမလဲ … ? (၁)
10:11:00 pm Myanmar Spirit
များမကြာခင်ကာလမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး ၂၀၁၆ ကို ကူးပြောင်းပါတော့မယ် … ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာပြည်မှာလည်း အစိုးရသစ်တစ်ရပ်နဲ့ အတူ … နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ အပါအဝင် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်း တွေလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြန်ဆန်ချောမွေ့လာပြီးတော့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တွေလည်း ပိုမိုပွင့်လင်းလာကြပါတော့မယ် … ။ လူငယ်တွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားကြမလဲ … ? လူငယ်တွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့ Soft Skills တွေကို ရေးသားပါမယ် …
၁။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု
လူတစ်ယောက်ဟာ အသိပညာဗဟုသုတ ပြည့်စုံဖို့အတွက် နယ်ပယ် အသီးအသီးကို သိနေဖို့ လိုပေမယ့် တကယ် အသုံးချဖို့အတွက်တော့ တစ်ခုခုကို တတ်ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သိတာနဲ့ တတ်တာကို ကွဲပြားဖို့လိုပါတယ် … သိတာက Knowledge ဖြစ်ပြီးတော့ တတ်တာက Skill ပါ၊ သိနေရုံလောက်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်မပြေပါ … တကယ်တတ်ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုပါတယ် … ။ တကယ် တတ်ကျွမ်းကျင်ဖို့ အတွက်ကတော့ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်နေဖို့လိုပါတယ် … ။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဲပုံပြင်ထဲကလို ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်တွေ မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ … တစ်ခုခုကို ဇောက်ချရွေးချယ်ပါ … ပညာရှင်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားကြစေချင်ပါတယ် … ။
သက်ဆိုင်ရာ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပေမယ့် ပညာရေးစနစ်ရဲ့ လွဲမှားမှုအောက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာကို (၁၀) နှစ်ကျော်ကြာပြီး ထိုက်သင့်သလောက် မတတ်မြောက်ခဲ့ ကြပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ မရှိမဖြစ်လောက်ကို အရေးပါနေပါပြီ။ ဘာသာစကား တစ်ခုဆိုတာ ကွန်ပျူတာမှာ ဆော့ဝဲလ်သွင်းသလို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရမလာနိုင်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး မပေါ့ဆပါနဲ့ … အချိန်ဆိုတာ ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားတာပါ … ကတယ့်အချိန်ရောက်မှ … မရှုနိုင်မကယ် နိုင် ဖြစ်တတ်ပါတယ် …။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပြင် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တရုပ်၊ ဂျပန် နဲ့ ကိုရီးယား ဘာသာစကား တွေဟာလည်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အခြေအနေတွေအရ လိုအပ်ချက် များလာနိုင်ပါတယ်။
၃။ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှု
နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုတာမှာ အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာ နဲ့ အွန်လိုင်း အသုံးပြုမှုပါ။ ကွန်ပျူတာ နဲ့ အင်တာနက်ကို စာရိုက်ရုံ၊ ချက်တင်ထိုင်ရုံ လောက်နဲ့တော့ အဆင်မပြေပါ။ Email တစ်စောင်ကို သတ်သတ်ရပ်ရပ်နဲ့ စနစ်တကျ ပို့တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို နေ့တိုင်းကိုင်နေပြီးတော့ Zip ဖိုင်ကို မဖြေတတ်၊ Power Point ကို သေသေချာချာ မပြင်တတ်၊ အသေးစား error လေးတွေက အစနားမလည်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ ဒီနေ့အထိ တွေ့နေရဆဲပါ။ လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝမှာ ဘာသာစကားက တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေ မှန်သမျှကလည်း ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်နဲ့ ပဲ ဆက်သွယ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Official သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
၄။ သတင်းအချက်အလက် နဲ့ ဗဟုသုပြည့်စုံမှု
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးဟာ သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ အင်မတန် အလျင်အမြန် စီးဆင်းနေပါတယ်။ တစ်ချက်မသိလိုက်တာနဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခု လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူ သတင်းအမှားတွေ သတင်းအယောင်တွေကလည်း များလှတဲ့အတွက် စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက် ဗဟုသုတ ပြည့်စုံဖို့ လိုပါတယ်။ အရေးကြီးတာက စာဖတ်ဖို့ပါ … ခုအချိန်မှာ စာအုပ်အထူကြီးတွေ ကိုင်ဖတ်စရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖတ်လို့ရနေပြီဖြစ်သလို e-book တွေလည်း ဖတ်လို့ရနေပါပြီ … ။ ရတဲ့ အချိန်ကိုလုပြီး စာဖတ်ဖို့ အနည်းဆုံး တစ်နေ့ ၁ နာရီလောက် အချိန်ပေးပေးပါ။ သုတကို လည်း ဖတ်ဖို့လိုသလို လူမှုဝန်းကျင်မှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေဖို့ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထားရှိဖို့ ရသ စာပေတွေလည်း ဖတ်ဖို့ လိုပါတယ် … ။
နောက်အချက်တွေကိုလည်း ဆက်ရေးပါဦးမယ် …
Credit to Aung Ko U - UMK
မူရင်းလင့် => https://www.facebook.com/aungkouumk/posts/792646840862106:0
Excel to PDF ( သို့မဟုတ်) PDF to Excel အလွယ်တကူပြေ...
AVG Internet Security 2016 16.0 Build 7441 (x86/x6...
♪ ZPNI (2016) - ဇော်ပိုင် ၊ ဖြူ ဖြူ ကျော်သိန်း ၊ န...
Counter Strike Source 2013 Full Online Patch + Gam...
လူငယ် နှင့် စိတ်ဖိစီးမှု
Email အဟက်ခံရခြင်း ဆိုတာ .....
Advanced System Care Ultimate 9.0.1.627 ML
စာမှဘဝ ဘဝမှစာ-လယ်တွင်းသားဆရာစောချစ် (စာပေဟောပြောပွ...
Adobe Illustrator CC 2015 v19.2.1.147.1 Multilingu...
အရှင် နန္ဒမာလာဘိဝံသ - မိမိစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနည်း
လူငယ်တွေ စာဖတ်ဖို့ …
Clash of clan v8.116.2 (26.1.2016)
ဆရာညီမင်းညို စာပေဟောပြောပွဲ (29.08.2015)
“လူငယ် နှင့် အရက်”
Automate the Boring Stuff with Python: Practical P...
Laptop အကြောင်းတွေကို စုံစုံလေး သိစေချင်လို့ ...
အဓိက နှင့် သာမည
Windows KMS Activator Ultimate 2016 v2.7(Win Vista...
မိမိ ဘလော့မှာ facebook comment အလွယ်တကူ ထည့်နည်း
လူငယ် နှင့် အချိန်
Android Mod Games V (10 Nos)
‎ကြာနီကန်တရားများ‬ ၅၃ ပုဒ်ပါခဗျာ
Android Firmware တင်နည်းများ
“နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် လူငယ်များ၏ အခန...
Website မှာတင်သမျှ Post တွေကို Facebook သို့ Auto ...
Adobe Dreamweaver CS6 12.0 Build 5808 Multilanguag...
FIRST TOUCH SOCCER 2016 MOD APK+OBB
Nero Burning ROM 2016 17.0.00300 + Activator (Dire...
Android OS ကိုအခြေခံသည့် Remix OS 2.0 ကိုကွန်ပျူတာ...
သင့်မှာ Blog တစ်ခုရှိနေပြီလား ???
Android Game Hacker Collection
♪ ခုနစ်ကြိမ်မြောက်ဘားကမ့် ရန်ကုန်အား ကျင်းပမည့်နေ့...
Android Mod Games IV (10 Nos)
WinRAR v5.30 FiNAL (x86|x64) - PreActivated + Port...
HTC Desire 816 ဖုန်းကို Official Stock Rom ပြန်တင်...
အကောင်းဆုံး ADB and Fastboot ကို ၁၅ စက္ကန့်ဖြင့် In...
မိမိ Facebook Profile ကိုဘယ်သူတွေကြည်သလဲ ကြည့်နည်း...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အထများ
Android Mod Games III (10 Nos)
A Smarter Way to Learn HTML & CSS: Learn it faster...
Ronaldo (2015) Full Movie Download in 700MB 720p H...
ဦးသိန်းလွင် E-book (3 Nos)
ဆရာကြီး "အောင်သင်း"၏ စာအုပ်များနှင့် စာပေဟောပြောမှု...
မနက်ဖြန်ကို ပိုလှစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ သွယ်
How to write Myanmar names in English နာမည်ရေးနည်း...
Android Mod Games II (10 Nos)
Gunship Battle 3D 1.9.5 Apk Mod
Clear FaceBook V.55.0.0.18.66 Apk
Android Mod Games I (10 Nos)
အရည်အချင်းဆိုတာ မတော်တဆ ရလာတာ မဟုတ်ပါ …
သက္ကရာဇ် ဖြိုခြင်းနှင့် ထီးသုဉ်း၊ နန်းသုဉ်း၊ မြို့သ...
ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ် နှင့် ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာ
တိပိဋကဓရ ရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲကြီးအကြောင်းသိကောင်းစ...
"ပုညခင်"စာအုပ် (၃၅)အုပ် စုစည်းမှု
Platinum Hide IP 3492
နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တေယျ မြတ်စွာဘုရား သမိုင...
Android Mini Games (46 Nos)
ဒုက္ခ သစ်ပင် …
Adobe Acrobat Pro DC 2015.009.20071 (Original Adob...
Smadav Pro Rev 10.4 Full Free Serial Number Key 20...
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. Save လုပ်ပြီး သိမ်းထာ...
နှစ်သစ်မှာ လုပ်သင့်တာလေးတွေ … (၂)
“သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး”၏ MP3 - တရားတော်များ” 110 ပ...
Adobe Photoshop CS6 3D v13.1.2 EXTENDED + KeyGen
နှစ်သစ်မှာ လုပ်သင့်တာလေးတွေ … (၁)
English Ebooks (10 Nos)
၂၀၁၆ မှာ လူငယ်တွေ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားကြမလဲ … ? – (၂)...
Revo Uninstaller Pro v3.1.5 Final (32/64-bit) - Fu...
Snackshots (Happy Myanmar)
Engineer, Technology and Computer Ebooks (33 Nos)
Kaspersky Reset Trial v5.0.0.117 | 3.3 Mb
PHP Solutions Dynamic Web Design Made Easy : 3rd E...
CyberLink PowerDVD Ultra 15.0.1916.58 with Crack F...